အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးအောင်ပြောပြတဲ့ “ရည်းစားထားနည်း” – Barnyar Barnyar
မြန်မာပြည်မှာ ကွမ်းယာရောင်းသူဘဝကနေ အပတ်တကုတ်ကြိုးစားရင်း အောင်မြင်မှုတွေရလာပြီး အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာတဲ့ “ဦးအောင် (ဦးအောင်ဆန်းဝင်း)” က သူ့ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဘဝအကြောင်းကို “ကွမ်းယာသည်ရဲ့ ရည်းစားထားနည်း” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။
ဘာနေ့သမီး လဲ? မမေးလိုက်မိဘူး
ပညာအရည်ချင်း ၈ တန်း တောင်သူသားသမီး
မိဘတောင်သူ ပညာအရည်ချင်း ၁၀ တန်း
မင်္ဂလာဆောင်ဘို့ရဘို့ ၅နှစ် စောင့်ရတယ်
သူ့အိမ် ကိုယ့်အိမ်က ခန်းမပါဘဲ
သတို့သမီး သတို့သားအရံ ခေါ်ဘို့နေနေသာသာ
ဓါတ်ပုံဆရာကခင်လို့ ၃ ပုံဘဲရိုက်ပေယ်
ခုတော့ အမျိုးတွေနဲ့ပုံ တစ်ပုံဘဲရှိတော့တယ်
မင်္ဂလာမောင်မယ် ဆွမ်းကယ်တို့ ကိတ်မုန့်ခွန်တို့
၈၀၀၀ ရပါတယ် သိန်း၈၀၀၀ မဟုတ်ပါ
ရိုးရိုး ရှစ်ထောင်ကျပ်ပါ ခုခေတ်လိုဆိုရင်
ဒါပေမဲ့ အဲဒီငွေက လာသမျှလူကို
ထ္မင်းကြွေးနိုင်ပါတယ် ရွှေတစ်ကျပ်သား ၃၅၀၀
မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက် ဘယ်လိုနေ ဘယ်လိုသေ
ထီးလိုတဖုံ ယပ်လိုတသွယ် အနွေးထည်လိုတမျိုး စောင့်ရှောက်နေတာကြောင့်
လို့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် Aung San Win အကောင့်ကနေ ဖော်ပြခဲ့ပြီး ပြန်လည်မျှဝေသူ ၃ ထောင်နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ ပကာသနမဖက်ပဲ အရှိကိုအရှိအတိုင်း ဘဝကို ရိုးသားကြိုးစားစွာ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ “ဦးအောင်” ကတော့ လူတိုင်း လေးစားအားကျရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အောငျသမာဓိရှဆေိုငျပိုငျရှငျ ဦးအောငျပွောပွတဲ့ “ရညျးစားထားနညျး”
မွနျမာပွညျမှာ ကှမျးယာရောငျးသူဘဝကနေ အပတျတကုတျကွိုးစားရငျး အောငျမွငျမှုတှရေလာပွီး အောငျသမာဓိရှဆေိုငျပိုငျရှငျကွီးတဈယောကျ ဖွဈလာတဲ့ “ဦးအောငျ (ဦးအောငျဆနျးဝငျး)” က သူ့ရဲ့ရိုးရှငျးတဲ့ အိမျထောငျရေး ဘဝအကွောငျးကို “ကှမျးယာသညျရဲ့ ရညျးစားထားနညျး” ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျလေးနဲ့ ဝမြှေခဲ့ပါတယျ။
ဘာနသေ့မီး လဲ? မမေးလိုကျမိဘူး
ပညာအရညျခငျြး ၈ တနျး တောငျသူသားသမီး
မိဘတောငျသူ ပညာအရညျခငျြး ၁၀ တနျး
မင်ျဂလာဆောငျဘို့ရဘို့ ၅နှဈ စောငျ့ရတယျ
သူ့အိမျ ကိုယျ့အိမျက ခနျးမပါဘဲ
သတို့သမီး သတို့သားအရံ ချေါဘို့နနေသောသာ
ဓါတျပုံဆရာကခငျလို့ ၃ ပုံဘဲရိုကျပယျေ
ခုတော့ အမြိုးတှနေဲ့ပုံ တဈပုံဘဲရှိတော့တယျ
မင်ျဂလာမောငျမယျ ဆှမျးကယျတို့ ကိတျမုနျ့ခှနျတို့
၈၀၀၀ ရပါတယျ သိနျး၈၀၀၀ မဟုတျပါ
ရိုးရိုး ရှဈထောငျကပျြပါ ခုခတျေလိုဆိုရငျ
ဒါပမေဲ့ အဲဒီငှကေ လာသမြှလူကို
ထ်မငျးကွှေးနိုငျပါတယျ ရှတေဈကပျြသား ၃၅၀၀